M/weynaha Koonfur Galbeed oo la kulmay Sh. Mukhtaar Roobow oo ku xiran Mogadishu… – Hagaag.com
M/weynaha Koonfur Galbeed oo la kulmay Sh. Mukhtaar Roobow oo ku xiran Mogadishu…
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed C/Casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta la kulmay Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo bishii December ee sanadkii hore laga soo xiray magaalada Baydhabo.
Kulanka ayaa ka dhacay guri uu xabsi ku yahay Mukhtaar Roobow oo ay gacanta ku heyso Hey’adda NISA, kaasoo ku dhow xarunta Dhexe ee NISA ee loo yaqaano Guriga Habar Khadiijo.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in kulanka la isku soo qaaday arrimaha xarigiisa, shaqaaqooyinkii ka dhashay sidii loo xalin lahaa iyo qaabkii lagu sii deyn lahaa.
Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen ayaa la sheegay in Mukhtaar Roobow ka raalli geliyay qaabkii loola dhaqmay iyo dhibaatooyinkii ka dhashay markii la soo xiray, isagoo u sheegay inuu diyaar u yahay in wax kasta oo tabasho ah miiska wada hadalka lagu dhameeyo.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in xilligii la soo xirayay aanu isaga xil heyn, isla markaana haatan uu dadaal ugu jiro sidii loo sii deyn lahaa, Madaxda dowladda Federaalka kala hadlay
Wararka ayaa sheegay in kulanka ka hor uu Madaxweynaha Koofur Galbeed uu la kulmay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Roobow ayaa la sheegay inuu markii hore diiday la kulanka C/casiis Lafta Gareen, balse markii dambe lagu qanciyay inuu la kulmo, si loo bilaabo wada hadalada lagu sii deynayo.
Mukhtaar Roobow oo ahaa Musharax ayaa 13 bishii december ee sanadkii hore 2018 laga soo xiray magaalada Baydhabo, iyadoo Ciidamo Itoobiyaan ah ay ka soo qabteen Madaxtooyada Baydhabo, waxaana rabshado ka dhashay xarigiisa ku dhintay 15 qof oo uu ku jiray Xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Koonfur Galbeed.